IXiaomi isungula iMi 9T Pro eSpain nakwamanye amazwe | Iindaba zeGajethi
Ukwandiswa kukaXiaomi kwilizwe lethu ngaphandle kwamathandabuzo yenye yezo zinto zenza isifotho kuyo nayiphi na enye inkampani ethi izame ukusondela. Kule meko, inkampani yaseTshayina isandula ukubhengeza ukumiliselwa ngokusemthethweni kweXiaomi Mi 9T Pro kwilizwe lethu kunye nabanye abaninzi abavela kwi-European Union. Le yimodeli yakutshanje kuthotho lwayo Iiflethi Mi 9 nakwisiginitsha bayayiqinisekisa ukuba yiyo efowuni ngokukhawuleza kuluhlu lwamaxabiso.
Singatsho ngokuvakalayo oko zimbalwa okanye akukho zixhobo zikhoyo ngoku ezongeza ukusebenza okuphezulu ngexabiso elifanelekileyo, Kodwa uXiaomi sele enesiqhelo kuthi malunga noku kwaye singacinga ukuba kuyinto eqhelekileyo xa sibona la maxabiso maxabiso ngezi nkcukacha.
1 I-Mi 9T Pro iqala ngexabiso lama-euro angama-399
2 I-6,39-intshi ye-AMOLED FHD + isiboniso
3 Ixabiso kunye neemodeli zokufumaneka
I-Mi 9T Pro iqala ngexabiso lama-euro angama-399
Ewe unokucinga ukuba eli nani liphezulu kakhulu kumaxabiso abanawo kwii-smartphones zabo zangoku, kodwa ukujonga nje ezinye zeenkcukacha eziphambili zeXiaomi Mi 9T Pro kwanele ukuba siqonde ukuba sijamelene isixhobo esimangalisayo ngokwexabiso lomgangatho wentsebenzo. Isixhobo sine-S processornapdragon 855, equlathe i-CPU octacore ngesantya esiphezulu se-2.84GHz. Yongeza kwakhona iQualcomm Adreno 640 GPU entsha, eyonyusa ukusebenza, xa kuthelekiswa ne-Snapdragon 845 eyandulelayo, nge-45% kunye ne-20% ngokwahlukeneyo.
Ukuba oku bekungonelanga, iMi 9T iza ixhotyiswe ngenkqubo yokupholisa ye-graphite ye-bidirectional 8-ehambisa ubushushu obuveliswa ngexesha lokusetyenziswa ixesha elide kukhuseleko olukhulu kwaye njengoko besitsho kwinkampani uqobo: isixhobo esifanelekileyo se abadlali, abaqulunqi kunye neengcali ezincinci. Ikwabandakanya ibhetri ephezulu ye-4000 mAh kwaye ixhasa ukutshaja okukhawulezayo kwe-27W, okuvumela ibhetri ukuba ihlawuliswe kwi-58% kwimizuzu nje engama-30, kunye nentlawulo epheleleyo kwimizuzu engama-73.
Umboniso we-AMOLED I-6,39-intshi FHD +
Enye into ekufuneka ithathelwe ingqalelo kwesi sixhobo yi Isikrini se-AMOLED I-6,39-intshi FHD + ohamba ekhwele ekufezekiseni umlinganiso wesikrini ukuya kumzimba we-91,9%. Ukucwangciswa kokukhanya kokukhanya kwe-DC kulungisa ngokuzenzekelayo ukuqaqamba kwescreen kwaye kuphelise ukudanyaza kwiimeko zokukhanya eziphantsi, ngelixa Umboniso welanga 2.0 Ivumela ukujonga ngokulula kwiimeko ezikhanyayo.
Ngakolunye uhlangothi iza ifakwe kwitekhnoloji ye Isizukulwana sesi-XNUMX kwisikrini sokuvula iminwe, Enobukhulu benzwa enkulu kwaye, njengoko kucacisiwe nguXiaomi uqobo, inyusa izinga lempumelelo ekuvulekeni nakwisantya sokwamkelwa kweminwe. I-Mi 9T Pro ikwabandakanya i-3.5mm jack port, imisebenzi emininzi ye-NFC kunye nokuhamba rhoqo kwe-GPS.
Wena Wen, linoxanduva lweXiaI-IOM eNtshona Yurophu icacisile kumajelo eendaba:
Olu khululo lutsha, ngaphakathi kwesakhelo sechungechunge lwethu Iiflethi Mi 9, iqinisekisa kwakhona ukuzibophelela kukaXiaomi ukuzisa izixhobo kwintengiso yaseSpain premium kunye nolwazi olungcono lomsebenzisi. IMi 9T Pro sisixhobo esenzelwe ngokukodwa abo bathengi bafuna ukusebenza ngokungaqhelekanga, ibhetri enkulu kunye nomgangatho ophezulu wokufota, zonke ngexabiso elinokhuphiswano.
La ikhamera yangemva kathathu ene I-lens eyi-48MP ye-AI, i-13MP ebanzi kunye ne-8MP yefowuni hlala ngasemva kwesixhobo. Useto lokufota ebusuku kunye neenketho zokuhamba ezivumela abasebenzisi ukuba bafezekise imifanekiso ekumgangatho ophezulu. Kwelinye icala, umgangatho wevidiyo ugudile, enkosi kwisoftware ye-UHD ye-4K ehlaziyiweyo, ekwaziyo ukufaka imifanekiso kwi-60fps.
Ixabiso kunye neemodeli zokufumaneka
Sineemodeli ezimbini ezahlukeneyo zale Mi 9T Pro.Imodeli yokungena yongeza i-6 + 64 GB kwaye iyafumaneka kwintengiso yangaphambi kokuthengisa ukusukela namhlanje ngo-Agasti 20. Esi sixhobo siza kuthengiswa ngo-Agasti 26, kwivenkile esemthethweni yeXiaomi yam.com, Mi Stores kunye ne I-Amazon ixabiso kwi I-399 i-euro. Imibala yale modeli ngamalahle amnyama, luhlaza okwesibhakabhaka kunye nelangatye elibomvu. Kwinxalenye yayo, umahluko we-6 + 128 GB, ngexabiso le- € 449, ziya kufumaneka kwivenkile ekwi-intanethi nakwi: Amazon, El Corte Inglés, FNAC, MediaMarkt kunye neNdlu yeeFowuni, ukuqala kweyoMsintsi elandelayo.
Eli lixesha lokuqala ukuba isixhobo Xiaomi sibonakale kumaqonga eAmazon ngaxeshanye eYurophu eSpain, eFrance, e-Itali, eNetherlands nase-United Kingdom. Njengoko besitshilo ekuqaleni kweli nqaku, inkampani yaseTshayina iyaqhubeka nokufumana umhlaba kwintengiso yethu nakwiYurophu iphela. Kancinci kancinci kwaye emva kweminyaka emininzi apho amawaka abasebenzisi baceliwe ukuba bakwazi ukuthenga ezi smartphones kunye neemveliso zeXiaomi ngamajelo asemthethweni Kuzalisekisiwe kwaye ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa inkampani inezigidi zabasebenzisi ezikhula kancinci kancinci kwintengiso efuna amaxabiso ahlengahlengisiweyo kunye nomgangatho kwiimveliso, into ebonakala ngathi uXiaomi uyayazi indlela yokuzinikela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » IXiaomi isungula iMi 9T Pro eSpain nakwamanye amazwe
I-eFootball i-PES 2020 yomdlalo wevidiyo esemthethweni ye-EURO 2020